I-Industrial Testing Instruments Factory-China Industrial Testing Instruments abavelisi, ababoneleli
DRK304A Isalathiso seoksijini
Isivamvo se-oksijini echanekileyo, isiphumo sokubonisa idijithali, ukuchaneka okuphezulu, ubomi benkonzo ende, ulwakhiwo olulula, ukusebenza okulula, akufuneki ukubala, ukusebenza kwephaneli, uxinzelelo lwegesi, indlela ecacileyo, echanekileyo, efanelekileyo, ethembekileyo, ephezulu, ephuma kumazwe angaphandle yolawulo lwe-Oxygen analyzer. ukuhamba kweoksijini.
DRK218 Voltage Breakdown Test Isixhobo
Isixhobo sokuvavanya ukuchithwa kwe-voltage DRK218 silawulwa lulawulo lwekhompyutha.Ngenkqubo entsha yedijithali edibeneyo yesekethe ephuhliswe ngokuzimeleyo yinkampani yethu, iNkqubo yoLawulo lweSoftware igqityiwe.
DRK110B imitha yokufunxa amanzi
Ukufunxwa kwamanzi ngephepha le-DRK110B sisixhobo soyilo kunye nokwenziwa ngokusekwe kwiiparamitha zobugcisa kunye neemfuno zobugcisa ezichazwe kurhulumente.
DRK250 iTemperature Constant and Humidity Box
I-DRK250 Lo matshini ulinganisa imimandla eyahlukeneyo yokusingqongileyo, ukuvavanya iimveliso ezahlukeneyo kunye nezixhobo ezingafunekiyo zokuxhathisa ubushushu, ukuxhathisa ukufuma, ukuxhathisa ngesibindi, kunye nokuxhathisa ubushushu obuphantsi.Ifanele iphepha, ushicilelo, i-electronics, umbane, isinyithi kunye namanye amashishini.
Ibhokisi yokuguga ye-DRK251
Igumbi loVavanyo lwe-DRK251 Thermal Index lilungele uvavanyo lokumelana nobushushu, iindawo zombane, kunye neemveliso zeplastiki zemathiriyeli yokugquma umbane.
DRK252 Ibhokisi Yokomisa
Inkampani yethu yenzelwe i-DRK252 ibhokisi yokomisa, izixhobo ezigqwesileyo, ubugcisa obugqwesileyo, kwaye iyilwe ngokupheleleyo ngokwemigangatho efanelekileyo yezixhobo zovavanyo.